Mampiasà pejy fitodiana tsara tarehy sy mamaly ao anatin'ny minitra miaraka amin'ny pires
LeadPages dia sehatra fitobiana izany dia ahafahanao mamoaka pejin-pejy misy modely, mandray andraikitra miaraka amin'ny mpanamboatra tsy misy kaody, drag & drop, kitiho vitsivitsy monja. Miaraka amin'ny LeadPages, afaka mamorona pejy fivarotana mora foana ianao, vavahady tongasoa, pejin'ny fipetrahana, pejy fanombohana, pejin-pejy, fanokafana pejy tsy ho ela, pejy fisaorana, pejin'ny sarety, pejy mivarotra, pejy momba ahy, pejy andiany fanadihadiana ary maro hafa… 200+ modely misy. Miaraka amin'ny LeadPages, azonao atao:
Mamorona ny fisianao an-tserasera – mamorona sy mamoaka pejy web toa matihanina ao anatin'ny minitra vitsy.
Manangona fitarihana mahafeno fepetra - Amboary ny votoaty rehetra avoakanao miaraka amin'ny pejy, pop-up, bar fampandrenesana, ary fitsapana A/B izay manova ny fifamoivoizana amin'ny Internet ho mpitarika sy mpanjifa.
Mivoatra ny orinasanao - Na manangona fandoavam-bola ianao na manao dinika momba ny fandaharam-potoana, ny Leadpages dia manangona ireo fitaovana ilainao hampitomboana ny orinasanao mba hahafahanao manamboatra ny varotra nomerika anao.
Tranonkala, pejy fipetrahana, bara fanairana, & pop-up - Mamorona ny fanatrehanao an-tserasera ary manangana ny lisitry ny mailakao miaraka amin'ny tolotra miovaova be sy endrika opt-in.
Mpanamboatra tsy misy kaody, tarihina ary ariana - Mamorona sy mamoaka votoaty manana kalitao matihanina, mandray andraikitra amin'ny finday ao anatin'ny minitra vitsy tsy misy kaody vitsivitsy.
Môdely mandray andraikitra amin'ny finday - Leadpages dia manatsara ny môdely tsirairay mba ho tsara amin'ny fitaovana rehetra, na desktop, tablette, na finday.
Pejy mahasoa SEO - Ampifanaraho ary jereo ny fomba fisehon'ny pejinao amin'ny milina fikarohana. Mametraha marika meta (lohateny, famaritana ary teny fototra) ary jereo ny pejinao amin'ny fotoana tena izy.
Fampidirana mahery vaika - Mifandraisa amin'ny fitaovana efa ampiasainao: MailChimp, Google Analytics, Infusionsoft, WordPress, sy ny maro hafa! Miampy fampiharana 1000+ amin'ny alàlan'ny Zapier.
Mpanamboatra endrika misafidy - Tariho sy ampidino mora foana ny endrika iray amin'ny pejin-tranonkala na pop-up, safidio ny sahanao, amboary ny endrikao, ary tariho ny fitarihanao amin'ny fitaovana na fampiharana rehetra.
Torohevitra fiovam-po amin'ny fotoana tena izy – Manandrama ilay sehatra tokana manome anao toro-hevitra momba ny fanatsarana amin'ny fotoana tena izy, mba hanampy amin'ny faminaniany ny zava-bitan'ny pejy iray alohan'ny hamoahanao.
Fanadihadiana tsotra - Araho mora ny zava-bitan'ny pejinao fipetrahanao sy ny doka Facebook, mba hahafahanao manatsara rehefa mandeha ianao.
A / B fitiliana – Amboary ny pejinao fipetrahanao ho an'ny fiovam-po ambony kokoa amin'ny alàlan'ny fanaovana fitiliana fisarahana tsy misy fetra—anisan'izany ny fitsapana A/B.
LeadPages Miaraka amin'ny sarety fiantsenana, marketing amin'ny mailaka ary sehatra automatisation marketing amin'izao fotoana izao ao anatin'izany ny 1ShoppingCart, InfusionSoft, Mailchimp, Office Autopilot, GetResponse, Constant Contact, AWeber, GoToWebinar, 1AutomationWiz, iContact, SendReach ary ny maro hafa.
Ny vidiny dia tena lafo tokoa ary misy pejy fidirana tsy misy fetra, fidirana amin'ny modely rehetra, fampidirana autoresponder, fampidirana WordPress, fidirana amin'ny programa afiliana, ary ny fifanarahana isan-taona dia nahena tamin'ny famandrihana isam-bolana.
Atombohy ny Andrana maimaim-poana ny LeadPages!
Fampahafantarana: Tena talanjona izahay, nisoratra anarana ary nanoratra ity lahatsoratra ity niaraka tamin'ny anay Affiliate rohy!
Tags: 1AutomationWiz1Cart fiantsenanaAWeberfoana ContactGetResponsegotowebinariContactInfusionsoftsehatra fitobianaPage templatespejy pejyLeadPagesmailchimppejy fitetezana findaypejy fiantsenana mamalySendReach.pejy fiakarana takelaka